Fitsaboana Proton - Fitsaboana ny homamiadan'ny ankizy - Proton California
Fomba fitsaboana ny Proton ho an'ny homamiadana pediatric
Miady amin'ny homamiadana pediatric miaraka amin'ny famaritana toa an'ny Laser
Ao amin'ny California Protons, dia manangana fiaraha-miasa akaiky eo amin'ireo marary, ray aman-dreny sy mpitsabo izahay mba hamorona drafi-pitsaboana manokana mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny zaza tokana. Ny haitao fanodinana ny vatan-java-manodinam-bolo miovaova dia endrika marim-pototra indrindra amin'ny fitsaboana ny famelomana aretin'ny kansera, izay ahafahan'ny dokotera mikendry an-tsakany sy an-davany ny fivontosan'ny zaza iray amin'ny fatra mifehy azy. Tena manan-danja tokoa izany ho an'ny ankizy sy ny tanora izay mbola mitombo, mora tohina amin'ny taratra ary miatrika risika lehibe kokoa noho ny fihanaky ny taratra.
Raha oharina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika efa zokiolona, ​​ny teknolojia fanodinam-bokatra vita amin'ny pensilihazo dia manome ny taratra proton amin'ny fivontosana ao anaty 2 milimetatra sy amin'ny fikarakarana fatratra. Azontsika atao ny mamely ny tsiranoka pediatric amin'ny alàlan'ny sosona ary manamaivana ny fandefitra manimba amin'ny fahazoana ny taova mahasalama sy ny taova. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny ampahany mahery indrindra amin'ny angovo mivantana ao amin'ny fivontosana, mampihena ny fiparitahana amin'ny taolana mahasalama isika ary ny voka-dratsiny mifandraika amin'izany mety hiteraka olana amin'ny ho avy, anisan'izany ny fitomboan'ny fihanahana, ny fahantrana amin'ny kognitif ary ny homamiadana faharoa voageja. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny ankizy mameno ny fitsaboana amin'ny fahatsapana fahatapahana na fahatarana hafa, mijanona ho mazoto ary manohy ny fanaony.
Proton Cancer Pediatric
Fitsaboana fitsaboana antsipirihany
Karazana homamiadana homarihina
Astrocytoma sy glioma hafa, anisan'izany ny lalana optika / hypothalamic glioma, oligodendroglioma, oligoastrocytoma, anaplastic astrocytoma
Kankana teratoid / Rhabdoid atypical
Hatran'ny sela mikraoba intracranial (germinoma)
Ny sarcoma Ewing / Primitive neuro-ectodermal tumor (PNET)
Ny histiocytosis X
Ahoana ny fomba itondranay ireo mpanala famandrihana zaza
Arovy ny tavy mahasalama sy ny taova manodidina
Tazony hatrany ny kalitaon'ny zaza mandritra ny fitsaboana
Mampihena ny voka-dratsin'ny fitsaboana amin'ny taratra, anisan'izany ny fitomboan'ny mihena, ny fihenan'ny fahatsapana, ny fahahenan'ny fihainoana ary ny olana momba ny hormonina
Ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fikarakarana - hopitaly ho an'ny ankizy
Ny ekipanay ao California Protons dia miara-miasa amin'ny mpitsabo aretin-tsaina momba ny radiom-panafody an'ny mpitsabo aretin-jaza, mpitsabo aretin-tsaina momba ny pediatric ary mpitsabo mpanampy ny zaza, ka karakarain'ny manampahaizana pediatrika isaky ny lalana. Ankoatr'izay, ny mararintsika tanora dia manana fidirana fanokanana voatokana, faritra filalaovana ankizy-jaza, zaridaina ivelany manasitrana ary efitrano fanarenana azy ireo misaraka amin'ny olon-dehibe marary.
Soa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana pediatric
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara kokoa amin'ny taratra miakatra amin'ny fivontosan'ny homamiadan'ny havokavoka sy ny hozatra, ary mampihena ny fatra amin'ny sela miaro ny vatana sy ny taovam-pitenenana. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Ny fitondroana marim-pototra ny fandefasana beam-bolo ny pensilihazo dia mitondra tombony be dia be ho an'ny marary pediatric. Marina indrindra izany amin'ny kanseran'ny atidoha sy ny hazondamosiko. Ny fikarohan-tanana mazava tsara ao amin'ny atidoha dia midika fa vitsy kokoa ny neon-jaza mivelatra dia miharan'ny taratra manimba ny taratra. Ao amin'ny hazondamosina, io fametahana io dia mandika ny tara-pahazavana ao amin'ny hozatra manodidina, toy ny fo, havokavola, kibony ary taova fiterahana.
Ny fahaizan'ny Proton therapy hiaro ireo sela salama amin'ny taratra dia mampihena ny mety hihena amin'ny ankizy sy ny tanora voan'ny Ependymoma, fivontosan'ny ati-doha mahazatra. Rehefa tsaboina amin'ny taratra taratra X-ray mahazatra, dia mety hanakana ny fivoaran'ny ati-doha ary hanimba ny fahaizan'ny kognita hafa.
Raha oharina amin'ireo proton miely miparitaka, ny fitsaboana ataontsika ho an'ny ankizy dia manitatra ny safidy fitsaboana hikarakarana karazana fivontosana sy fivontosana ho an'ny taolam-paty mahery kokoa, ao anatin'izany ny fivontosana mafy be any akaikin'ny taova lehibe. Ny kankana maharary koa dia azo tsaboina amin'ny fatra avo kokoa ary ny homamiadana miverimberina dia azo lasibatra na dia eo aza ny fitsaboana fitsaboana taratra teo aloha.
Mety amin'ny zanakao?
Satria ny marary pediatric dia mahatsapa fitsaboana fitsaboana taratra, ny fitsaboana protecam beam dia mety ho safidy mahomby ho an'ny homamiadana maro. Betsaka ny ankizy sy tanora manefitra tsara ny fitsaboana proton, na izany aza, ny valintenin'ny tsirairay dia mety miovaova. Ny habetsaky ny fitsaboana sy ny halavan'ny fitsaboana dia hihena miorina amin'ny kansera karazana. Miankina amin'ny sehatra sy ny karazana, ny fitsaboana mitambatra, ny fitsaboana simika ary ny taratra dia mety ilaina amin'ny fivontosan'ny zaza. Ny safidy fitsaboana koa dia voakasiky ny karazan'aretina, taona, ny fahasalamana ankapobeny sy ny safidin'ny tena manokana.
Medulloblastoma dia fivontosan'ny atidoha cerebellar izay manomboka eo amin'ny fototry ny karandoha ary afaka mihanika any amin'ny faritra hafa amin'ny ati-doha sy ny tadina. Ny fikarakarana ara-pahasalamana mazàna dia mitambatra fandidiana, fitsaboana simika ary taratra mankany amin'ny atidoha sy ny hazondamosiko manontolo. Ny fitsaboana proton dia tena mahasoa amin'ny fitsaboana ny medulloblastoma amin'ny zaza satria afaka misoroka ny fatra amin'ny ratra amin'ny fo, havokavola, tsinaibe ary sela mahazatra. Amin'ny alàlan'ny famerana ny taratra, ny fitsaboana proton dia mampihena ny fiantraikany amin'ny fotoana fohy sy ny loza mety hitranga amin'ny fahatarana na fananganana taova tsy mahazatra, ny homamiadana faharoa, ny fo ary ny havokavoka, ny fananganana tiroza ary ny fitomboan'ny endriny.
Ny fivontosan'ny ependymoma matetika dia mitoetra ao amin'ny faritra intracranial ao amin'ny ati-doha ary misy fiantraikany amin'ny hozatra ao amin'ny rafitry ny rafitry ny nerve. Ny fitsaboana dia matetika misy fandidiana, arahan'ny taratra. Ny fitsaboana Proton dia mamela ny fampitana an-tariby ao amin'ny taratra mahery dia ilaina mba hifehezana io fivontosana io. Zava-dehibe tokoa izany, raha ny akaikin'ny atidoha, ny atidoha, ny tadin'ny hazondamosina ary ny mivalona optika. Ireo rafi-pitatitra miabo saro-pady ireo dia mitaky fikarakarana manokana indrindra mba hahazoana antoka fa tsy simba amin'ny fatra simika be loatra.
Germinoma sy tsy mikraoba sela mikraoba (NGGCT) dia fivontosan'ny atidoha izay miely ao amin'ny sela mikraoba ary mitranga matetika amin'ny ankizy sy ny tanora. Miankina amin'ny subtype amin'ny fivontosana, ny fitsaboana dia mety miovaova, fa ny ankamaroany dia mitaky fandidiana maromaro, fitsaboana simika ary taratra. Ny fitsaboana Proton dia mampihena be ny habetsaky ny atidoha miatrika ny vokatry ny fitsaboana taratra. Izy io ihany koa dia miaro ireo taolam-paty sy taova ara-dalàna hafa manodidina ny faritra izay atahorana ny hisian'ny aretina fanampiny ary mila fitsaboana, toy ny fo, havokavoka ary tsofina, rafitra ventricular manontolo ary axis craniospinal.
Lymphoma dia sokajy kansera izay manomboka ao amin'ny sela ny hery fanefitra. Ny fitsaboana amin'ny ankapobeny dia miteraka fitsaboana simika sy taratra. Satria misy lymphomas be dia be tafiditra amin'ny faritry ny tratrany, ny fitsaboana ny proton dia mety ho fanampiana betsaka ho an'ny marary pediatric, noho ny fahafahany tsara kokoa ny miaro ny fo, havokavola, tratra ary ny hazondamosin'ny tsiranoka tsy ilaina. Amin'ny alàlan'ny famerana ny fatra amin'ny taratra, ny fitsaboana proton ho an'ny zaza dia mihena koa ny fihenan'ny voka-dratsin'ny taratra, toy ny aretin'ny fo na ny havokavoka, ny homamiadana faharoa ary ny fitomboan'ny endriny.
Fitsaboana fitsaboana pediatric Proton Therapy
Fitsaboana ny homamiadana miverimberina
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanome valiny mitovy amin'ny taratra X-ray manara-penitra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mety hanimba ny fiainana toy ny fitomboan'ny fihanahana, ny fatiantoka kibo, ny fandrenesana ny olana ary ny olana hormonina noho ny manimba ny taratra sy ny taova mahasalama. Izy io koa dia manome ny mety hisian'ny fihenan-drà mety ho an'ny homamiadana faharoa any aoriana any noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy taova mahasalama manodidina anao.
Na izany aza, ny fitsaboana homamiadana rehetra dia manana tombony sy fatiantoka. Aza adino ny miresaka momba ny mety ho loza rehetra, ary koa ny safidy fitsaboana, miaraka amin'ny oncologist amin'ny zanakao.
Fikarohana fikarohana manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadana pediatric
Fampitahana dosimetika momba ny radiotherapy fotonma sy efa namboarina mahery vaika ho an'ny rhabdomyosarcomas pediatric parameningeal
Fitsaboana radiation radiation Fractionated ho an'ny craniopharyngioma pediatric: tatitra mialoha
Porofon'ny fizika sy radiografika ny halaviran'ny andry proton amin'ny irradiation craniospinal
Radioteroka Proton ho an'ny lalan-drà pediatric / rabdomyosarcoma: valim-panokafana sy dosimetrika raha ampitahaina amin'ny fitsaboana madiodio miovaova.
Ny drafitra fitsaboana miaraka amin'ny proton ho an'ny retinoblastoma pediatric, medulloblastoma, ary sarcoma pelv: ahoana no mampitaha ny protons amin'ny teknika mifanaraka amin'ny hafa?
Ny fahafantarana ny fiantraikan'ny kognitif amin'ny ankizy izay voan'ny medulloblastoma